Bolivia: mihatra ny lalàna miaramila any Pando · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2008 20:15 GMT
Miatrika fihetsiketsehana sosialy hatrany i Bolivia amin'izao fotoana izao, raha mibodo ny tranom-panjakana maro ao Santa Cruz ny vahoaka mpanohitra, ary vao nisy fifanandrinana nifanaovany tamin'ny mpanohana ny fitondrana nahafatesana 15 tany amin'ny faritry Pando. Vokany, nampihatra ny lalana miaramila tamin'io faritra io ny fanjakana.Nitaky ny hialan'ny masoivoho Amerikana Phillip Goldberg ampangainy ho miray tendro amin'ny mpanohitra ihany koa aza ny filoha Evo Morales. Namaly izany ny fitondram-panjakana amerikana ka nangataka ihany koa ny fandroahana ny masoivoho Boliviana Gustavo Guzman. Ho firaisan-kina moa dia nitaky ny fandroahana ny Masoivoho amerikana any aminy ny filoha Venezoelana Hugo Chavez (es).
Maro ny mpamaham-bolongana no niresaka momba ity toe-draharaha ity, ary maro amin'izy ireo no namoaka sary sy lahatsary mampitolagaga. Ao amin'ny rakitsariny Flickr i Julio Ricardo Zuna Cossio no maneho sary ny fibodoana ny tranom-panjakana ao Santa Cruz. Namoaka ny sarin'ny fahapotehan'ny tranom-panjakana ihany koa i Fernado ao amin'ny Vecino Barrio.
Sarotra moa ny mahafantatra ny tena nitranga isan-tanàna tokoa rehefa be loatra ny honohono sy ny tsaho. Miteny izaho hatrany i Renzo Colanzi hitantarany ny niainanynandritra ny fotoana mampitaintaina ao Santa Cruz. Ankoatra izay dia nahazo SMS amin'izay mety ho fifanandrinana sy fisamborana maro izy.
Nantsoin'ny rahalahiko iray izay aho tamin'iray maraina nitantarany fa manatona ny kianja 24 septambra izy fa hanafika ny mpanohana ny antokon'ny fitondrana. Satria moa eo akaiky eo ny misy ahy dia nihazakazaka aho ny hamonjy ilay kianja saingy tsy nisy na inona na inona tany.(…) Teo an-toerana moa dia efa mahalala ilay fiarabe (izay nanakana ny olona) avokoa ary nisy Land Cruiser ihany koa eo manao tahaka izany ho an'izay andian-tanora rehetra tany afovoan-tanàna.
Tena mavesatra kokoa ho an'ireo izay tsy nandray anjara tamin'ny filaharana, fanoherana na fifanandrinana ny ahiahy. Manatsidika ny fepetra raisin'ny fianakaviana maro dia maro i Karen ao Santa Cruz:
Anjarako ny niantsena ka hitako tany fa manangona hanaovana tahiry ny maro tahakany hoe tsy hisy intsony ny ampitso. Mino aho fa tsy nampoizinia ny toe-draharaha hatramin'ny omaly, hatramin'ny nahenoako ny resaky ny vehivavy anankiroa teo amina mpivarotra sakafo anaty boaty. miresaka sahala amin'ireny hoe ho avy ireny ny atambo ireny ry zareo. Izany hoe ny ady an-trano. Misy ny manaiky ,misy ny mandà…
Nofaranany amin'ny fanontaniana izay diso amin'ity raharaha ity ry zareo:
Na iza diso na iza marina, ny azo itokisana aloha dia tsy hisy ny entona fandrehitra, tsy ho ampy ny vola hividianana sakafo, na solika, ary amin'izao fotoana izao dia manahy ny rehetra fa hovonoiny isika. Tsy azo iainana mihitsy ny tahaka izao.
Ny fototry ny olana eo amin'ny fitondran foibe sy ny faritry Pando, Beni, Santa Cruz ary Tarija moa dia ny (fitsinjarana ny) vola azo avy amin'ny solika (IDH amin'ny teny Esipaniolona), izay nahena ary nafindra ho amina fandaharam-panjakana hafa tahaka ny fanomezana (fanondrotana) ny fisotroan-drononon'ny zokiolona, ary eo ihany koa ny fikasan'ny fanjakana hametraka volavolan-dalampanorenana hitsapana ny hevitry ny vahoaka. Mitaky ny hampidirana ny fizakantena notanterahina tamina fitsapa-kevi-bahoaka nampiady hevitra (notanterahiny manokana) ho ao anaty lalampanorenana io ny Goverinoran'ireo faritra voalaza ireo.
Ny tafika ihany no manana ny lakilen'ny famahana izao olana izao. Hoy i Migule Cantellas ao Pronto:
Ahoana ihany koa ny amin'ny tafika. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola namaly ny tafika na dia misy aza ny fanafihana any amin'ny misy azy (izay naharatrana manamboninahitra sy ireo nantsoina). Hita kosa fa ny tena mifamely dia ireo vondrona sivily avy amin'ny mpitaky ny fizakantena sy avy amin'ny mpanohana ny fitondrana. Hampanaja ny filaminana ve ny tafika hanohanany ny fitondrana? hatramin'izao aloha dia nasehony fa tsy te-hampiasa hery ry zareo raha tsy efa misy ny baiko voasoratra mazava avy amin'ny filoha (tsy te-ho tompon'andraikitra amin'izay fahafatesana sy faharatrana teraka avy eo manko ry zareo).
Na izany aza dia efa misy fanambaran'ny tafika hita pirinty ao amin'ny Al Minuto haka amin'izay ireo tranom-panjakana nobodoina.